China CY-2 (Ordinary outdoor push-pull clothes hanger) abakhiqizi nabaphakeli | UJialong
Kuzinze kakhudlwana, kuphephe futhi kuqinile
Ukuthungwa kwempahla Ingxubevange A00aluminium Ukuhlukaniswa komkhiqizo izingongolo ezintathu / izingongolo ezine
umbala I-Champagne / isiliva
Ubude besigxobo sokomisa 0.6m / 0.8m / 1m / 1.5m / 2m / 2.5m / 3m
(Singayenza ngokwezifiso ngokuthanda phakathi kuka-0.5m no-3M uma kunesidingo)
ubude 0.8m 1.0m 1.5m 2m 2.5m Isisindo sokusekelwa okukodwa
Inombolo efanelekayo yemigodi 5 6 8 12 15
Isisindo sezinti ezintathu 0.67kg 0.84kg 1.26kg 1.68kg 2.1kg 1.34kg
Isisindo sezingongolo ezine 0.89kg 1.12kg 1.68kg 2.24kg 2.8kg 1.67kg
(Ubukhulu beshubhu ngu-1.0 mm)
Ipayipi Wall Ubukhulu
Isici:Usebenzisa imishini engenisiwe, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, ukukhiqizwa okuhle kakhulu, ngemuva kokwelashwa kwepayipi kunokusebenza okuqinile kokulwa nokugqwala, ukumelana ne-oxidation, ukwelashwa kwebanga lemoto. Iphansi elijiyile elikhulu, ngemuva kokufakwa, ubakaki uzinzile futhi uqinile, i-pole push futhi idonse ngokushelela, futhi ukuthwala imithwalo ye-willow kunamandla. Idizayini eyindilinga ephindwe kabili yenza umkhiqizo ube muhle kakhulu.
Faka:Ukufakwa kwamahhala kwamahhala, inqobo nje uma kunephuzu elinqunyelwe, ubakaki ungalungiswa ngaphakathi kobude besigxobo.
Ngentando:Siphinde futhi sisekele ukwenza ngokwezifiso ithubhu, singeza ukusekelwa ngaphakathi kweshubhu ukwandisa ubuhle ngenkathi sizinza kakhudlwana.
Izisekelo:Lapho sifaka imikhiqizo yethu, sizoyipakisha futhi siyihlukanise ukuqinisekisa ukuthi ingalethwa kuwe isesimweni esihle.Yiqiniso, sizophinde sinikeze izingxenye ezengeziwe ukuvimbela ukulimala nezingxenye ezingekho. Sizophinda sikhiphe imikhiqizo eyonakalisiwe ngokuzayo. Ngenkinga yokufaka, sizoba nokufundiswa okuningiliziwe kokufakwa. Uma kunesidingo, singahlela umenzeli wendawo ukuthi afake kusayithi.
Kunamakhasimende amaningi azokhetha imikhiqizo yethu. Sikhiqiza izigidi zemikhiqizo njalo ngonyaka. Singaqinisekisa ikhwalithi ngenkathi siqinisekisa ubuningi. Izinga leziqu lifinyelela kuma-98%, futhi sizokwenza yonke imininingwane nayo yonke imikhiqizo ngenhliziyo yethu.
Isixazululo:Amanye amakhasimende angaba nemibono yokwenza ngezifiso isiphanyeko. Singahlinzeka ngezixazululo ezithile ngokuya ngemibono yamakhasimende, kufaka phakathi inani lezimbobo, ukwenziwa ngokwezifiso kombala wesesekeli, neminye imininingwane.
Ikesi:Isibonelo, kumkhiqizo othunyelwe eVietnam, ikhasimende lasicela ukuthi some izingubo eziningi ngangokunokwenzeka ngaphansi kombandela wokuthi ipayipi lalingama-80cm kuphela. Ngemuva kokuhlolwa kaninginingi, simbe izimbobo eziyi-12 esigxotsheni ukuxazulula inkinga yokuthi isigxobo besisifushane kakhulu ukuthi singasomisa izingubo.
Langaphambilini I-CY-3 (Isiphanyeko sezingubo ezijwayelekile zangaphandle)
Olandelayo: CY-1 (Okuvamile ongaphandle push-donsa izingubo isiphanyeko)
Izingubo ezomisa Stand Electric
Isomisi se-Electric Airer
Electric Uphahla Izingubo nokomisa
Electric Indwangu nokomisa isiphanyeko
Izingubo zikagesi i-Airer Dryer